axle Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy axe China
Axle maharitra ho an'ny semitrailer fitoeran-javatra
Ny teknolojia famokarana famaky China dia lasa milamina kokoa ary manana laza tsara. Isan-taona dia manana kamiao 300.000 mitaky fanavaozana eo amin'ny tsena anatiny. Manodidina ny 50% no tranofiara fitaterana ho an'ny kaontenera mitondra. Mitaky eo amin'ny 10% ny fiara mifono solika. Ny ankamaroan'ny tranofiara dia mampiasa axle vita amin'ny china. Rehefa afaka 20 taona niainana fitsapana lalana dia lasa azo atokisana kokoa ny porofon-tsarimihetsika china.
Manomboka amin'ny taona 2020, ny entana mampidi-doza rehetra dia tokony hampiasa famaky kodiarana kapila misy fampiatoana rivotra. Izay afaka mamela ny fitaterana ho azo antoka sy azo antoka kokoa.
Ny vatan-tsambo dia mampiasa fantsom-bolo tsy misy fangarony 20Mn2, amin'ny alàlan'ny fametahana paosin-tsolika iray sy fitsaboana hafanana manokana, izay mihoatra ny fahaizan'ny entana sy ny hamafiny.
Ny spindle axle, izay namboarin'ny lathe voafehy niomerika, dia vita amin'ny akora firaka.
Ny toerana misy ny zana-kazo dia zahana amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mafy, noho izany ny fiakarana dia azo amboarina amin'ny tanana fa tsy fanafanana, mety koa amin'ny fitazonana sy fanamboarana.
Ny spindle axle dia mifandray amin'ny alàlan'ny welding welding, izay mahatonga ny andry manontolo azo antoka kokoa sy mafy orina.
Ny toerana misy ny axle dia ampiasaina amin'ny milina fitotoana mitazona ny fitaterana amin'ny ambaratonga mitovy, aorian'ny fikarakarana, afaka manome toky izy fa ny concentricity ao amin'ny 0.02mm dia hentitra.
Ny menaka fanosotra fanosotra dia omen'ny EXXON Mobile izay afaka manome fampisehoana mahasosotra avo sy miaro tsara ny fiterahana.
Ny valin'ny famaky axle dia fampisehoana avo lenta, tsy asbestos, tsy fandotoana ary fiainana lava.
Raha te-hanamarina sy hanolo mora foana, dia miaraka amin'ny toeran'ny havizanana mba hampahatsiahivana ny mpanjifa hijery sy hitazona.
Ny fitondra famaky dia raisina amina marika malaza any Shina, miaraka amin'ny tombony azo amin'ny famatrarana ny fahafaha-manao, Haingam-pandeha mihodina, tanjaka tsara, mahazaka hafanana ary mahatohitra hafanana.
Vaky amponga: Barke drum ho an'ny BPW, MAN, VOLVO, BENZ, SCANIA, SCANIA, DURAMETAL, IVECO, NISSAN, RENAULT, HYUNDAI, INTERNATIONAL, FREIGHTLINER.MACK, ROR sns.
Slack Adjuster: BPW Manual ary mandeha ho azy Slack Adjuster
Kitapo fanamboarana famonoana volo vita amin'ny fomba Alemanina BPW sy kitapo fanamboarana camshaft
Tononkira 8T 9T 11T 11T 13T 15T 16T 18T 18T 18T 20T 20T FUWA hafainganam-pandeha ary ho an'ny semi-tranofiara, kamio sy tanker miaraka amina kitrana avo lenta sy kiraro frein.
Ny ampahany lehibe hafa dia ao anatin'izany: andry famaky matanjaka kokoa, fanamboarana milomano, voanjo hidin-trano, fitaterana, efitrano fandraisam-bahiny, voanjo kodiarana, satrokely, fonosana vovoka,
fuwa amerikanina fanamboaran-drakitra fanamainana manaparitaka kitapo sy kitapo fanamboarana camshaft sns.
Ahoana no hiatrehana ny olana fa tsy afaka miverina amin'ny toerana mety azy ny kodiaran'ny kamio aorian'ny familiana? Ny antony lehibe mahatonga ny kodiaran'ny fiara miverina ho azy amin'ny toerana marina aorian'ny familiana dia ny fametrahana ny kodiarana no mitana andraikitra lehibe. Ny caster kingpin sy ny fironana kingpin dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famerenana mandeha ho azy ny familiana. Ny vokatry ny marina ny caster kingpin dia mifandraika amin'ny hafainganan'ny fiara, raha ny effec effec ...